Women and Urinary Tract အမျိုးသမီးနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Women and Urinary Tract အမျိုးသမီးနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါ
တင်ပြီးသားစာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေ့မေးကြသူတွေထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ရချင်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ယောက်ပါတယ်။ မျိုးပွါးလမ်းပိုးဝင်လို့ ဆရာဝန်က ဆေးညွှန်ထားတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးက အဲဒီဆေးတွေသောက်ရင် ကိုယ်ဝန်မရမှာ စိုးလို့တဲ့။ မျိုးပွါးလမ်းနဲ့ ဆီးလမ်းမှာ ပိုးဝင်နေသူတွေ ပိုးသေဆေးမသောက်လို့မရပါ။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ ကျွန်မအမေ အသက် ၅၄ နှစ်ပါရှင့်။ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် ၂၂၀ လောက်ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်က ငှက်ဖျားပိုးနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲပိုးဝင်လို့ အဖျားတက်ပြီး ဆေးရုံတက်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးများသောက်ပြီး ပြန်ကောင်းလာပါတယ်ရှင့်။ အခုတခါ အဖျားခဏခဏတက်လို့ သွေးပြန်စစ်တော့ ဆီးပိုး ပြန်ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ အမေဆီးသွားရင်လည်း အဖြူဖတ်လေးတွေ ပါနေပါတယ်ရှင့်။ ဆီးပိုးအမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းရန်အတွက် သောက်ရမယ့်ဆေးနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေး သိပါရစေဆရာရှင့်။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။
၂။ ဆရာ အသက် ၁၇ နှစ်၊ မိန်းကလေး၊ ဆီးသွားတဲ့အခါအောင့်နေလိုပါ။ ဆီလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာလား၊ တခြား ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် ဆီးအောင့်နိုင်သလဲဆရာ။ ပြန်လည်ဖြေကြားမူတွေအတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆီးအောင့်တာက ဆီးလမ်းပိုးဝင်လို့ဖြစ်တာများတယ်။ ဆီးပူတာ၊ အတွင်းအင်္ဂါချင်း နီးလို့ဖြစ်တာတွေက ပိုးကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဆီးလမ်းပိုးက ဆီးထွက်ပေါက်ကနေ ဆီးအိမ်၊ ကျောက်ကပ်ထိ တက်တယ်။ ပြန်ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တိုင်း ဆေးလိုတယ်။ ဆီးအက်စစ်ဓါတ်များရင်ဖြစ်တယ်။ ဆီးအိမ်မှာဖြစ်တာက သိပ်မဆိုးပါ။ ချက်ချင်း ကုရင် ကောင်းသွားမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကျောက်ကပ်အထိ ပိုးရောက်သွားရင် ဆိုးတယ်။ ဆီးသွားတိုင်း ပူပြီးနာမယ်။ ဆီးခဏခဏသွားချင်စိတ် ဖြစ်နေမယ်။ ဆီးစပ်၊ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနေရာက နာမယ်။ ဆီးထဲ အနယ်ပါမယ်။ ဆီးနံ့ဆိုးတယ်။ ဆီးထဲသွေးပါတတ်တယ်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ရင် နောက်ကျော ဘယ်နဲ့ညာမှာနာမယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ ချမ်းမယ်။ ပျို့ချင်-အန်ချင်မယ်။ ဆီးစစ်မှ ပြည်-ဆဲလ်တွေ့ပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ မခံစားရတာလည်းရှိတယ်။ ကျောက်ကပ်ကို အလုပ်မလုပ်နိုင်စေတာအထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကျောက်ကပ်သိပ်မကောင်းသူဆိုရင် ပိုဆိုးစေမယ်။ ပိုးက သွေးထဲရောက်ရင် တခြားနေရာတွေအထိ ရောက်မယ်။
လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေဆိုတာ ကဲလ်မီဒီးယား၊ ဂနိုရီးယား၊ ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်တွေဖြစ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးများ၊ ရေ-အရည် သောက်နည်းသူများ၊ ရေစိမ်ပြီး ခဏခဏချိုးသူများ၊ ဆီးသွားချင်ပေမဲ့ မသွားသေးဘဲ အောင့်ထားသူများ၊ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်ရှိနေသူများ။ မင်္ဂလာဦးဆီးအောင့်ခြင်း အဖြစ်များတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုသေးဘဲ ဆက်ဆံမှုပြုသူတွေ၊ ကလေးအမေမှာလည်းဖြစ်တယ်။
Urethritis and Cervicitis caused by Chlamydia ကဲလ်မီဒီးယားကြောင့်ဖြစ်သော သားအိမ်အဝ-ဆီးပြွန်အဝ ရောင်ခြင်း
• Azithromycin 1 g ၁ ကြိမ်။ (သို့)
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။ (သို့)
• Erythromycin base 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။ (သို့)
• Erythromycin ethylsuccinate 800 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။ (သို့)
• Levofloxacin 500 mg orally တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။ (သို့)
• Ofloxacin 300 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။
Acute Pylonephritis ကျောက်ကပ်ပြွန် ရက်တိုရောင်ခြင်း
• Ciprofloxacin 400 mg IV BD or 750 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ (သို့) Levofloxacin 500 mg IV တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ (သို့) Ampicillin 1 Gm တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်။ (သို့)
• Ciprofloxacin 500-750 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်။ (သို့) Ofloxacin 200-300-400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်။ (သို့) Trimethoprim-Sulpfamethoxazole 160/800 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်။
Acute Cystitis and Acute Prostatitis ရက်တို ကျား-မ ဆီးလမ်း၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျား-ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း
• Cephalexin 250-500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁-၃ ရက်၊ (သို့)
• Ciprofloxacin 250-500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁-၃ ရက်၊ (သို့)
• Nitrofurantoin 100 mg တနေ့ ၂-၄ ကြိမ် (အစာနဲ့)၊ ၇ ရက်၊ (သို့)
• Ofloxacin 200 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁-၃ ရက်၊ (သို့)
• Trimethoprim-Sulfamethoxazole 160/800 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်။
Chronic Prostatitis နာတာရှည် ဆီးလမ်း၊ ကျား-ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း
• Ciprofloxacin 250-500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁-၃ လ။ (သို့)
• Ofloxacin 200-400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁-၃ လ။ (သို့)
• Trimethoprim-Sulfamethoxazole 160/800 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁-၃ လ။
• Cefixime 400 mg ၁ ကြိမ်တည်း။ (သို့)
• Ciprofloxacin 500 mg ၁ ကြိမ်တည်း။ (သို့)
• Ceftriaxone 250 mg IM ၁ ကြိမ်တည်း။
1. Acidic Urine ဆီး အက်စစ်ဓါတ်များနေခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/acidic-urine.html
2. Honeymoon Cystitis ဟန်းနီးမွန်းမှာ ဆီးအောင့်တာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/honeymoon-cystitis.html
3. Urinary Tract Infection (1) ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/urinary-tract-infection.html
4. Urinary Tract Infection (2) ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/urinary-tract-infection.html
5. Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/urinary-tract-infection_18.html
6. Women and Urinary Tract အမျိုးသမီးနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/women-and-urinary-tract.html
7. Medicine for Diseases of Urinary Tract ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medicine-for-diseases-of-urinary-tract_18.html